Marxuum Muxamad Cali oo la aasay - BBC Somali
Marxuum Muxamad Cali oo la aasay
Aaska Muxamad Cali, oo ahaa mid ay kasoo qeybgaleen kumannaan qof oo kala diimo ah, ayaa waxaa lagu furay aayado Qur’aanka kariimka ah oo uu aqriyay Imam Hamzah Abdul Malik.
Munaasabadda oo ka dhacayday garoon ciyaaraha lagu dheelo ee magaalada Louisville, ayaa waxaa buuxiyay dad badan oo wanaag u rajeynayay marxuumka, isla markaana rabay in ay maqlaan taariikhdiisa.
Duqa magaalada Louisville, Dr Kevin Cosby, oo aaska ka hadlay ayaa sheegay in markii uu hanaqaadayay Muxamad Cali, ay qowmiyadda madow ee Maraykanka wajahaysay dhibaatooyin badan, balse uu Muxamad qaab aan horay loo arag ula tacaalay dhibaatooyinkaasi.
Sidoo kale dadka meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa Michael Lerner, oo ka tirsan culimada Yuhuuda Mareykanka. Waxa uu dhaliil dusha uga tuuray dadka Muslimiinta ku eedeeya dhibaatooyinka caalamka maanta ka jira.
Xaaska uu ka geeriyooday marxuumka, oo lagu magacaabo Lonnie Ali, ayaa sheegtay in nolashiisa ay waxbadan ka baratay. Waxa ay ka sheekeysay wixii ku dhaliyay in uu feerka barto, oo ahayd in baaskiilkiisa laga xaday. Lonnie Ali ayaa sheegtay in taasi ay cashar u tahay Maraykanka maanta jira.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Bill Clinton, ayaa ku dheeraaday furfurnaantii iyo kaftankii Muxamad Cali, isagoo sheegay in Mareykanka uu meel weyn uga yaallo.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, ayaa ka qeybgalay janaasadii Khamiistii Muxamad Cali loo sameeyay, balse kama aanu qeyb gelin munaasabadda xalay dhacday, asaga oo dib ugu laabtay dalkiisa.
Lama ogga sababta dhabta ah ee arrintaasi dhalisay, balse wararka qaar ayaa sheegaya in ay isfahmi waayeen qaban qaabiyayaasha aaska.
Allaha u naxariistee Muxamad Cali, ayaa waxaa iilka dhigay dad kooban oo isugu jira qoyskiisa iyo asxaabtiisa, taasoo ah sidii uu ka dardaarmay.